चीन रेडियो शटल कारखाना र निर्माताहरु | जानकारी
१. रेडियो शटल र्याक प्रणाली एक हो अर्ध स्वचालित औद्योगिक गोदामको लागि भण्डारण समाधान, फोर्कलिफ्टको सट्टा शटलको प्रयोग गरेर भित्र सामान भण्डार गर्नुहोस् को रैक। २ जस्तो रेडियो शटल मात्र पुनःप्राप्तिs प्यालेट र्याक अन्त्यमा, यो छ सुहाउदो कम कोटी र ठूलो ब्याच सामानहरू, जस्तै खाना, सुर्ती, फ्रिजर, पेय पदार्थ, फार्मेसी र आदि सामान्यतया, एउटा लेन छ को लागी मात्र एउटा वर्ग को सामान
1 स्वचालित एकल इनबाउन्ड इनबाउन्ड निर्देशन स्वीकार गर्दै, शटलले इनबाउन्ड अन्त्यमा सामानहरू लिफ्ट गर्दछ र खाली स्थानमा राख्छ त्यसपछि फिर्ता हुन्छ।
2 स्वचालित एकल आउटबाउन्ड आउटबाउन्ड निर्देशन स्वीकार गरेपछि, शटलले स्वचालित रूपमा भण्डारित प्यालेट लेनमा आउटबाउन्ड वा शटल मूभरमा लग्दछ।
3 लगातार इनबाउन्ड र
ब्याचमा निरन्तर इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड कार्यका लागि, अपरेट गर्न सकिने नम्बर रिमोट कन्ट्रोल, मोबाइल फोन वा सेटमा सेट गर्न सकिन्छ।
ट्याब्लेट पीसी (वैकल्पिक) एक पटक, र लगातार र भित्र काम एक क्लिक द्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
4 स्वचालित रूपमा A / B साइड स्विच गर्नुहोस् शटल लेनको दुबै छेउमा सामानहरू लिन सक्दछ, अभिमुखिकरण समायोजन गर्न आवश्यक पर्दैन।
5 प्यालेट अनुकूलता शटल बिभिन्न मोडलमा प्यालेटहरूसंग उपयुक्त हुन सक्दछ, कृपया लेन प्रवेश द्वारमा अपरेटिंग अघि अघि सेट गर्नुहोस्।
6 टैली मोड शटल निर्देशन स्वीकार गर्दछ, स्वचालित रूपमा लेनमा प्यालेटहरू एक एक गरी आउटबाउन्ड अन्त्यमा बोक्दछ र व्यवस्था गर्दछ।
7 गणना गणना लेनको संख्या स्वत: गणना गर्नुहोस्’s प्यालेट, र स्वचालित रूपमा दैनिक कुल इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड प्यालेटहरू गणना गर्नुहोस्।
8 ऊर्जा व्यवस्थापन मल्टि-स्तरको पावर थ्रेसोल्ड नियन्त्रण, यो कम ब्याट्री भने प्रतिस्थापन प्रम्प्टिंग संग वर्तमान कार्य पछि साइट सुरू गर्न फिर्ता जान्छ।
- विशेष अवस्थामा, शटल लाइन भन्दा बाहिर चार्ज गर्न सकिन्छ।
- लाइनमा आत्म-निर्णायक र सेल्फ-चार्जिंग (पूर्ण स्वचालित अपरेसनमा मात्र)
9 बहुउद्देशीय रिमोट कन्ट्रोल धेरै शटलहरू एक रिमोट कन्ट्रोल द्वारा संचालित गर्न सकिन्छ।
10 शटलको खोजी गर्नुहोस् रिमोट कन्ट्रोलको एक बटन थिच्नुहोस् शटलको खोजी गर्न र ध्वनि र प्रकाशद्वारा प्रेरित गर्नुहोस्।
11 म्यानुअली याद गर्नुहोस् रिमोट कन्ट्रोल, मोबाइल फोन वा ट्याब्लेट पीसी (वैकल्पिक), प्रणाली निर्देशन द्वारा म्यानुअल रूपमा मूल स्थितिमा सम्झनुहोस्
12 मुटुको धड्कन समारोह अनलाइन स्थिति (केवल पूर्ण स्वचालन मात्र) जाँच गर्नको लागि मुटुको धडकन जाँचबाट वास्तविक समयमा होस्ट कम्प्युटर नियन्त्रण प्रणालीमा कुराकानी गर्नुहोस्।
13 आपतकालिन रोक्नुहोस् आपतकालिन सिग्नल टाढा बाट पठाइयो जब आपतकालिन, र शटल तुरुन्त रोकिन्छ जब आपतकालिन उठाईन्छ
14 रिमोट प्रकार्य यो टाढाबाट प्रोग्राम अपडेट गर्न र डाउनलोड गर्न सक्षम छ (वाइफाइ नेटवर्कमा)।
15 प्रणाली अनुगमन वास्तविक समयमा निगरानी प्रणाली डेटा, र असामान्य स्थितिमा आवाज र प्रकाशमा अलार्म खडा गर्दै।
◆ सुरक्षाको ग्यारेन्टी
जब ड्राइभ-इन रेसि withसँग तुलना गरिन्छ, संरचना अधिक स्थिर हुन्छ। रिमोट कन्ट्रोल वा WCS द्वारा संचालित, र्याकमा ड्राइभ गर्न आवश्यक पर्दैन र र्याकि coll टक्कर घटाउने। मालको छिटो र अधिक सटीक भण्डारण अनुमति दिदा सुरक्षा उत्पादकता सुधार गर्नुहोस्।
Operation अपरेशन दक्षता धेरै बढाउनुहोस्
उच्च कार्य दक्षता, स्वचालित क्रमबद्ध, सूची। लचिलो अपरेशन मोड, सामान पहुँच मोड FIFO वा FILO हुन सक्छ, जसले अपरेशनको पर्खाइ समयलाई घटाउँछ।
फोर्कलिफ्ट आईसल घटे जब अन्य प्रकारका रैकहरूसँग तुलना गर्दा, विशेष डिजाइनले उच्च घनत्व भण्डारण प्राप्त गर्न सक्दछ।
PeOperation - इनबाउन्ड
१. रेलमा शटल राख्नुहोस्।
२. रिमोट कन्ट्रोल इनबाउन्ड बटन थिच्नुहोस्।
S.शटलले प्यालेट लिफ्ट गर्दछ। गहिरा स्थानमा सर्छ, प्यालेटलाई तल राख्छ।
S. नयाँ कामका लागि अगाडि फिर्ता जानुहोस्।
अपरेसन - आउटबाउन्ड
शटलले उल्टो अनुक्रममा समान अपरेशन्सहरू कार्यान्वयन गर्दछ।
गोदाम भण्डारण क्षेत्र लम्बाई ____mm ​​x चौडाइ xmm x उचाइ खाली गर्नुहोस्___mm
सामानहरू लोड गर्न र लोड गर्न गोदामको ढोका स्थिति
फोर्कलिफ्ट न्यूनतम गलियौं चौड़ाई _____; अधिकतम लिफ्ट उचाइ _____
इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड दक्षता: प्रति घण्टा प्यालेटहरूको मात्रा _____।
शटल डेलिभरी अघि परीक्षण गरिनेछ। ईन्जिनियरले शटल साइट वा अनलाइन जाँच गर्न सक्दछ।
एक बर्षको ग्यारेन्टी विदेशी ग्राहकका लागि २ hours घण्टा भित्र द्रुत प्रतिक्रिया। सर्वप्रथम अनलाइन जाँच गर्नुहोस् र समायोजन गर्नुहोस्, यदि अनलाइन मर्मत गर्न सकेन भने, ईन्जिनियरले साइटमा समस्याहरूको समाधान गर्नेछ। नि: शुल्क स्पेयर पार्ट्स वारंटीको समयमा आपूर्ति हुनेछ।
अघिल्लो: बहु शटल
अर्को: शटल Mover